Izixhobo zeTattoo, Inaliti yomvambo, iCartridge yeCattoo - MOLONG
Umatshini wokuqala weTattoo Pen oMatshini ongenazingcingo, oPhezulu ...
Yomeleza iidrafti ezintlanu nesixhenxe ...
Ubuchwephesha beTattoo Thermal Copier, UkuGqithisela ...
Amandla amakhulu ama-1800mAh amaXesha kunye neMemori yokuTshintsha ...
Ezilahlwayo abicah adjustable tattoo iCartridge ...
Ukuphakama kweTattoo kubude obuMnyama bokuPhumla
Umatshini weKingKong 3 weTattoo Cartridge
Izaqhwithi ezimhlophe ezilahlwayo Iingcebiso
Isitulo ukusonga ezijongene nemiba ngemiba yezemfundo for Tat ...
Ezilahlwayo Blue zoKhuseleko Bag for Tattoo ikliphu ...
I-10m yoKhuseleko lweTattoo yokuPhefumla ulungisa ifilimu
Zijikele umva isitulo computer isitulo ikhompyutha b ...
Magic 5CM bamba Cover Elastic Bukanqinishe ukuvaleka D ...
Umbala we-30mm weGradient oGuquguqukayo weCattoo Cartridge ...
Cacisa i-108mm yeeNgcaciso zeSterilized With Grip Stop Tran ...
Umgangatho ophezulu weTattoo Pen Kit Ngaphandle kweAluminiyam Ca ...
Black abicah intambo ibhityile ezilahlwayo umvambo gr ...
Iinyawo zentsimbi yokuTshintsha iTattoo Pedal
I-RCA Silicone ngerabha Tattoo Power Cord
Izixhobo zokuBhoboza iCatheter zomzimba
Ulusu olungapheliyo lokuQeqesha ulusu 290 * 195 * 3M ...
MOLONG TATTOO UKUBONELELA CO., LTD. esekwe ngo-2009, umenzi wobuchwephesha weTattoo eTshayina, ubonelela ngomgca opheleleyo wezixhobo zomvambo kunye nezinto ezikhoyo. Inaliti yeTattoo, iCartridge yeCattoo, Umatshini weTattoo, iTattoo Kit, iTattoo Ink, ukuBamba okulahlwayo, iTip elahliweyo, uNikezo lwaMandla, iZibonelelo zezoNyango, Izixhobo zeTattoo Studio, Izinto zokubhoboza, Izinto zoBumba, njalo njalo.
Umatshini we-MO kunye neekhatriji
Uninzi lwegcisa le tattoo sele liqalisile ukusebenzisa oomatshini bohlobo lwe MO kunye neekhatriji, kwaye abathengisi abaninzi be tattoo bafuna ukuthengisa kunye nokunyusa ngokukodwa kwimimandla yabo. Injongo yophawu lwethu lwe-MO kukwenza amagcisa eetattoo abe namava angcono e tattoo ngezixhobo ze tattoo zeMO, nokwenza izixhobo zetat ...
Umatshini wePen weTattoo engenazingcingo
Umatshini we tattoo sisixhobo esibalulekileyo kwinkqubo yokwenza umvambo. Wonke umculi we tattoo uchitha isixa esifanelekileyo semali ekuthengeni umatshini we tattoo. Lo matshini sisebenzisa ngoku iintsuku zihambile kwaye ziza nezinto ezininzi, kukho inkqubela phambili kwezobuchwephesha eyenzekileyo nge ...
Ukuphuhliswa kweTattoo Cartridges
Ukuphuhliswa kwezixhobo ze tattoo, ukusuka kwiinaliti zemveli zetattoo ukuya kwiinaliti zecartridge zekhathuni, kuye kwenza ukuba iitattoo zibe lula ngakumbi, kwaye kube lula ukuzisebenzisa. Kwiminyaka yakutshanje, inaliti yegobolondo iye yalawula imakethi yenaliti ye tattoo kwihlabathi. UKUBONELELA NGOKUQHELEKILEYO KWE-MOLONG